Jumlad yar oo la qaadan karo oo maalinle ah oo jeermiska disha iyo masaxaadda bakteeriyada Alaab-qeybiye iyo Soo-saare | Kafiican
* Xuduudaha sheyga
Magaca Product: 75% masaxa aalkolada
Lambarka Moodalka: QMSJ-304
Waxyaabaha: aan tolmo lahayn
Maaddooyinka firfircoon: jeermis dilaha, Nofeembar-xidhka, Ro-water
Waxyaabaha aan firfircooneyn: Biyaha, Aloe Vera, Udgoonka Citrus
Cabir: 14 * 18cm
Miisaanka (Gramme / Meter Square): 40gsm
Cadad halkii awood: 750 xisaab
Isticmaal Gaara: Bakteeriyada jeermiska, nadiifinta jeermiska iyo nadiifinta.
MOQ: 1000 gasacadood
Shahaadada: CE, FDA, EPA, MSDS
Nolosha shelf: 2 sano
Faahfaahinta xirxirida： 8 gasac / kartoon
OEM & ODM: Aqbal
Muddada bixinta: L / C、D / A、D / P、T / T、Midowga Galbeed
Dekedda: Shanghai, Ningbo
* Qeexida alaabta
Waxyaabaha lagu tirtiro jeermiska ayaa si dhakhso leh u nadiifin kara bakteeriyada dusha sare waxayna ku habboon tahay nadiifinta nadaafadda. Masaxa jeermiska bakteeriyada laguma daro oo keliya dareere jeermis dile ah oo si wax ku ool ah u dili kara 99.9% ee bakteeriyada, oo ay ku jiraan Escherichia coli, Salmonella, rotavirus iyo 90% ee xasaasiyadda. Oo weliba waxaan ku shubnay shaah cagaaran oo dabiici ah. Nafaqooyinka dabiiciga ah ee kujira shaaha cagaaran waxay leeyihiin saameyn gaar ah anti-gabowga, ladagaalanka kansarka, kansarka ladagaalanka, jeermiska lakin, iyo anti-bararka. Shaah cagaaranna wuxuu ka caawiyaa daahitaanka gabowga. Markaa uma baahnid inaad ka walwasho jeermiska waxyeelleynaya maqaarkaaga. Kani waa masaxaad jeermis dilis ah oo aan waxyeeleyn doonin maqaarka. Ma jiro wasakh iyo udgoon shaah cagaaran.
Masaxaadda jeermiska ayaa loo isticmaali karaa meelaha ugu adag, dusha sare ee aan dusha sare lahayn, oo ay ku jiraan qalabka ilmaha, qalabka guryaha, qaboojiyaha, qasabadaha, saxanka, qalabka albaabka, jikada iyo musqusha, nadiifinta dhulka, meelaha lala xiriirayo cunugga iyo alaabada elektaroonigga ah, maalin kasta waa la isticmaali karaa.
Loogu talagalay teknoolojiyada jeebka la xoojiyay, waxay xiri kartaa qoyaan ka badan sidii hore, sidaa darteed masaxayaasha waxay sii ahaan karaan qoyaan dheer. Kaliya waxaa kujira 10 kaniini baako kasta, kaas oo ku haboon in la qaado lana qaato wakhti kasta.
Waxaan ku leenahay warshad gaar ah Hangzhou, Zhejiang, Shiinaha. Waxyaabaha nadaafadda fiican ayaa qoysaska siiya wax ka badan 80 sano oo ah taariikh ilaalin, taas oo ka caawin karta qoysaska inay iska caabiyaan bakteeriyada isla markaana ka ilaaliyaan iyaga oo u maraya caadooyinka nadaafadda wanaagsan. Warshadeenu waxay kaloo taageertaa adeegyada OEM & ODM. Shirkadaha ganacsiga kala duwan, waxaan nahay xulashadaada ugu fiican iyo lamaane ganacsi oo aamin ah.
* Tilmaamaha Isticmaalka
1. Soo jiido filimka difaaca oo ka soo saar masaxa qoyan.
2. Fadlan dib-u-shaabbad isticmaal ka dib isticmaal kasta, oo ku kaydso dhinaca daboolka hoos si aad uga ilaaliso qalajinta.
3. Masax dusha sare si aad nadiif u noqotid, ka dib ku tuur masaxa qashinka qashinka.
Baakadaha la baari karo - Hubso in baakaduhu isku xirxiran karaan inta u dhexeysa adeegsiga si looga hortago masaxa dusha sare inuu u qalalo.
Masaxyada qoyan maahan kuwo deg deg ah, toos ha ugu tuurin suuliga.
* Macluumaad kale
Ka fogee meel carruurtu gaarto. Haddii si shil ah loo liqo: Haddii aad caafimaad dareento, la tasho xarun sun ah ama dhakhtar.
Haddii ay jiraan wax raaxo-darro ah inta lagu jiro isticmaalka, fadlan jooji isticmaalkiisa oo si dhakhso leh ula tasho talo-bixin caafimaad.
Hore: Warshad OEM 80 waxay masaxdaa bacda nadiifinta iskucelceliska 75% masaxa aalkolada
Xiga: 70% Alkohol Antibacterial Gel Hand Sanitizer oo leh keychain la hagaajin karo
Nadiifinta Qoyaanka sunta ah
Masaxada sunta ah
Nadiifinta Qoyaanka Qoyaanka ee Bakteeriyada
Masaxada jeermiska la isaga dilo
safarada tirtiro jeermiska
Jilicsan nadiifinta hoos jaakada tirtiro qoyan leh sare ...
Warshad liin dhadhanka jeermiska warshad pers ...